प्रधानमन्त्री ओलीलाई नातीको पत्र-‘जज योरसेल्फ थ्रु अदर्स आइज’-Nagarikaawaj.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नातीको पत्र-‘जज योरसेल्फ थ्रु अदर्स आइज’
हजुर बा ढोग गरें,
हजुर बा सर्वप्रथम ओली खलकबाट इतिहासमै पटक पहिलो प्रधानमन्त्री हुनु भएकोमा ढिला भए पनि बधाइ तथा शुभकामना, कहॉ बाट आयो नाति मैले त छोरा नै जन्माएको छैन भनेर खुब आत्तीनु भएको होलारु त्यसो होइन ।
म पश्चिमी ओली तपाइ पूर्वेली ओली हो क्यारे । ओलीको पुर्खेउली नाता सम्बन्ध एउटै हुन्छ रे नी सुनेको कतै ! त्यसैले मैले गर्भका साथ हजुरबा भन्दिए । तपाईको शारिरिक स्वास्थ्य त ठिकै होला तर मानसीक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन विग्रदो छ रे छिट्टै सन्चो होस् ,हुनत कसरी छिटो सन्चो होला र, उता डिल्ली राजदरवारको बल मीचाह, मदेश आन्दोलन, नाकाबन्दी, बिपक्षीको सास्ती, सिंहदरबारको बागडोर, भूकम्पपिडीतको समस्या, जम्बो मन्त्रीमण्डलको विस्तार र निवासतिर हजरमा सम्हाल्न निकै गाह्रो परेको छ होला ।
स्वभावीकै हो एउटा मान्छेलाई यति धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नु निकै चुनौती हो । तपाइलाई मान्नु पर्छ सबै नेपालीले, सवै क्षेत्रमा विज्ञता हासील गर्नुभाछ । उता कमेडीएन उखान टुक्का क्षेत्रमा पि एच डी नी गर्नु भाछ ।
खड्ग प्रसाद ओली नाम कसैले लीन वित्तीकै तपाईको बारेमा शान्दार गफ हाक्छु र भन्दिन्छु मेरो सक्दर हजुरवुबा हुन भनेर विचरा साथीभाइलाई त तपाइका भाषण बुझ्रन निकै हम्मे हम्मे पर्दो रहेछ । वुझ्रदैनन् रे तपाइका उखान टुक्का र अर्काे कुरा पनि भनिहालु उता मेरी बास्सै, तीतो सत्य अनि जिरे खुर्सानी टेलीश्रृखला चल्न बन्द भए रे तपाइले गर्दा, कलाकारहरु बेरोजगार भए तपाइकै कारणल,े सबै कलाकारलाई उछिन्दै सुपर हिट हुनु भयो रे हास्यक्षेत्रमा, बधाइ हास्य क्षेत्रमा पनि ओली खलक हावी भयो ।
भूकम्प पिडितले अझसम्म राहत पाउन सकेका छैनन, जव कि उनीहरुलाई एक छाक खान पनि यति मुस्किल छ । जाडोमा लगाउने न्यानो लुगा छैन विचरा पिडित दिन प्रतिदिन जाडोले कठाङ्गीदै ज्यान गुमाइ रहेका छन् । अकालमै मृत्यु हुन्छ । आशैआशमा तपाइका भाषण सन्दै । हुनत आजकाल सरकारमा मन्त्रीमण्डल र मन्त्रालय विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ जनतालाई झुट्टा आशाका वर्षात पारिदिनु हुन्छ सरकार टिकाउने चलखेलमा हुनुहुन्छ । खै कति दिनसम्म सहन सक्छन् ती पीडीत जन्ता बांकी नै छ हेर्न? विचरा भुकम्पपिडित ओलीकै भाषणमा लठ्ठिने भए ।
अनि हजुरवुबा उता डील्ली दरबारमा राजा (मोदी) र तपाइको राशी नमिल्ने पो हो क्यारे ?? वालापनमा भएको मित्रता अहिले पूरै सत्रुता छ रे की तपाइले हानेको गुरील्लाको अझै यादमा छन् पी ः को चुनावमा तपाइलाई हराउन खुब कदम लागेका थिए रे तर विचरा कस्ले सक्छ र ओलीलाई हराउन उता पाटी अधिवेशनमा पनि जित अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता अनि अहिले प्रधानमन्त्री !! उता पूर्वतिर चल्ने लामो दूरीका कुनै पनि बसका सिसा छैनन् । यातायात मजदुरहरु चार महिना देखी बेरोजगारी छन् ।
कालोबजारीले विग्राल रुप लिएको छ , देश अराजकतातीर जादैछ मदेश आन्दोलन छिट्टै पार लगाउनु पर्यो, युवाशक्ति दिनप्रतिदिन देश पलायन हुदैछ अनि तपाइजस्ता बृद्दहरुको भरमा देश चलीरहेको छ । उता विदेशतिर युवाले देश हाक्छन् र तर नेपालमा बृद्दाले देश हाक्छन् देशमै गरीखाने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्री ज्यू ।
केहिदिन अगाडी तपाइको अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्याममा पुरै हंगामा फैलायो एक बर्ष भित्र नेपाललाई पुरै लोडसेडीङ मुक्त बनाउने रे खै तीन महिना वित्यो अव वांकी नौ महिना छ भन्दै औला छाप अनि औला गन्दै बसेका छन् होला तपाइका जम्वो मन्त्रीमण्डलका मन्त्री –केटा केटीहरु) नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भइरहेको बेला तपाइले आझ्ना कार्यकर्ता समक्ष ’अब सिलिन्डरको फेज समाप्त भयो’ कहिले ग्यासको बुलेट आउला भनेर हेर्ने दिन गए र चुलाचुलामा ग्यासको पाइप हुन्छ, भित्तामा मिटर टासीन्छ अनि वाल्नुहुन्छ त्यसको पैसा तिर्नुहोस भन्नुभाको रैछ । मलाइ यो एक वर्षमा पुरा हुन्छ भनेर रत्तिभरको पनि विश्वास छैन । तातो पानी कुण्डबाट थर्मल विजुली निकाल्ने र पाँचतारे होटल वनाएर स्वीमीङ खेल्ने तपाइको यो दिवा सपना हो ।
तपाईका विश्वासीला कार्यकर्ता पनि खुबै गज्रीएका थिए तपाइका अभिव्यक्ति सुनेर । तपाइका कुरा सुनेर तिरीमिरी झ्याइ भएको त कसैला ? नढाटेर भन्नुहोस प्रधानमन्त्री ज्यू म अहिले १९ बर्षको ठिटो हुँ कति बर्ष कुनुपर्छ घरघरमा दाल, चामल अनि ग्यास, पानी र अरु अरु पाइप आउन …….
संसदीय व्यवस्थामा सपना वाड्ने काम सत्तापक्षले होइन, विपक्षी र प्रतिपक्षले गर्छन् । तर विडम्बना हाम्रा् देशमा ओलीजस्ता एः ले जनतालाई झुक्याउने अनि फसाउने हावादारी कुरा गर्दछन् । घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने काम असम्भव होइन छिमेकी देश बंगलादेशमा समेत छ यो । तर अलि समय र दिगो सोच हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, हजुरवुबा अंग्रजीमा एउटा भनाइछ – ’जज योरसेल्फ थ्रु अदर्स आइज’ अर्थात आफ्नो मूल्याड्ढन अरुका आँखाबाट गर । मान्छे सबै कुरामा पुर्ण हुदैन । ओली सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको पक्कै छ होला र केही गर्न बाँकी होलान् । जति उखान टुक्का भन्न सजिलो छ त्यति आम जनताको चित्तबुझाउन गाह्रो कुरा छ । तपाइको सरकारको कार्यकाल भावी दिनमा वोली होइन कामप्रति पूर्ण रुपमा लाग्नेछ । ओली खलक सरकार सफलताको शुभकामना ।
उही तपाइको नाती
तेज किरण ओली
पशुपतिको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा‘ले सिंहदरबारमा हंगामा !,बुटवलबाट यसाे भन्छन् पशुपति
प्रदेश ५ सरकारले मनायो स्थापना दिवस,हेरौं एक दर्जन तस्बीर
काँग्रेस नेताहरुकाे दावी : ‘भ्रष्टाचारले उम्लिएर कम्युनिष्ट सरकार एक बर्ष भित्रै सिद्धिन्छ’